Akụkọ - Ọmụma ngwaahịa nkedo igwe.
Ihe ọmụma nke ngwaahịa nkedo ígwè.
Nkedo bụ ụzọ dị mfe, dị ọnụ ala yana ọtụtụ ụzọ isi mepụta aluminom n'ime ụdị ngwaahịa dị iche iche. Ihe ndị dị ka nnyefe ike na injin ụgbọ ala na okpu n'elu ihe ncheta Washington bụ ihe niile sitere na usoro nkedo aluminum. Ọtụtụ ihe nkedo, karịsịa nnukwu ngwaahịa aluminom, na-emekarị n'ụdị ájá.
• Nkedo ga-agụnye atụmatụ iwepụ akụkụ
A ghaghị imepụta ihe nkedo iji nabata usoro nke ọ bụla. Maka mwepụ nke akụkụ, a ga-eji obere taper (nke a maara dị ka draft) mee ihe n'elu elu nke dabara na ahịrị nkewa ka e wee wepụ ụkpụrụ ahụ n'ụdị ahụ.
• Akụkụ nkedo nwere oghere
Iji mepụta oghere n'ime ihe nkedo (dị ka nke igwe blocks na isi cylinder eji n'ime ụgbọ ala), a na-eji ụdị adịghị mma eme cores. A na-emepụta nkedo nke ọdịdị a n'ụdị aja. A na-etinye kọlụm n'ime igbe nkedo ka ewepụrụ ụkpụrụ ahụ.
• Nkedo maka obere arọ na ike
Njirimara nke aluminom nke ịdị arọ na ike na-eweta uru ndị bụ isi mgbe a tụbara ya n'akụkụ. Otu ngwa a na-ejikarị nke aluminom anwụ anwụ bụ ihe mkpuchi nwere obere mgbidi nwere ọgịrịga na ndị isi n'ime ime iji bulie ike.
• Nkedo na mmalite akụkọ ihe mere eme nke aluminom
Ngwaahịa aluminom mbụ a na-ere ahịa bụ ihe nkedo dị ka akụkụ ịchọ mma na ngwa nri. Ọ bụ ezie na emepụtara ya site na usoro narị afọ gara aga, a na-ewere ngwaahịa ndị a dị ọhụrụ na ndị pụrụ iche.
Usoro nkedo aluminum
Nkedo bụ ụzọ izizi na nke a na-ejikarị eme nke aluminom ka ọ bụrụ ngwaahịa. E nwewo ọganihu nkà na ụzụ, ma ụkpụrụ ahụ ka dị otu: A na-awụsa aluminum a wụrụ awụ n'ime ihe ọkpụkpụ iji mepụtaghachi ụkpụrụ achọrọ. Ụzọ atọ kachasị mkpa bụ nkedo anwụ, nkedo ebu na-adịgide adịgide na nkedo ájá.
Usoro nkedo anwụ na-amanye aluminom gbazere ka ọ bụrụ nchara anwụ (ebu) n'okpuru nrụgide. A na-ejikarị usoro nrụpụta a eme ihe maka mmepụta dị elu. Akụkụ aluminom kpụrụ nke ọma nke chọrọ opekempe nke igwe na imecha nwere ike imepụta site na usoro nkedo a.
Nkedo ebu na-adịgide adịgide
Nkedo ịkpụzi na-adịgide adịgide gụnyere ihe ebu na cores nke ígwè ma ọ bụ ọla ndị ọzọ. A na-awụsa aluminum a wụrụ awụ n'ime ihe ebu, ọ bụ ezie na a na-etinye oghere mgbe ụfọdụ. Enwere ike ịme ihe nkedo ebu na-adịgide adịgide siri ike karịa nkedo anwụ ma ọ bụ aja. A na-eji usoro ihe nkedo na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide mgbe cores na-adịgide adịgide agaghị ekwe omume iwepụ na akụkụ emechara.
Ojiji juru ebe niile na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na ụlọ
Ụlọ ọrụ ụgbọ ala bụ nnukwu ahịa maka nkedo aluminom. Ngwaahịa nkedo mejupụtara ihe karịrị ọkara nke aluminom eji na ụgbọ ala. A na-ejikarị ụlọ nnyefe nke aluminom na pistons eme ihe n'ụgbọ ala na gwongworo kemgbe mmalite 1900s. A na-emepụta akụkụ nke obere ngwa ngwa, ngwá ọrụ aka, lawnmowers na ígwè ọrụ ndị ọzọ site na ọtụtụ puku ụdị ihe nkedo aluminom dị iche iche. Ngwaahịa nkedo nke ndị na-azụ ahịa na-ejikarị bụ cookware, ngwaahịa aluminom mbụ emere maka ojiji kwa ụbọchị.
Nke gara aga: Ngwa ubi nke aluminom alloy ngwaahịa.
Osote: Akụkọ ihe mere eme nke ịnwụ anwụ.